पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीको स्थिति नाजुक, शरीरका अङ्गले काम गर्न छाडे | जनदिशा
पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीको स्थिति नाजुक, शरीरका अङ्गले काम गर्न छाडे
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्वास्थ्यस्थित गम्भीर रहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा विगत तीन सातादेखि उपचाररत उनलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वासका लागि ‘भेन्टिलेटर’मा राखिएको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. भाष्करराज पन्तका अनुसार उनको रक्तचाप बढाउन औषधि प्रयोग गर्नुपरेको छ भने शरीरका महत्वपूर्ण अङ्गले काम गर्न छाडेका छन् । बितेका २४ घन्टादेखि पिसाब बन्द भएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीलाई बचाउन सक्ने सम्भावना कम देखिएको जनाउँदै डा. पन्तले चिकित्सा विज्ञानअनुसारका सबै उपचारविधि अपनाउँदा पनि उनको स्वस्थ्यमा सुधार नभएको बताए ।
Previous Previous post: कला–साहित्यका समस्याहरू र व्यक्तिवाद